Faritra Sava : tara ny famatsiana solika, niakatra ny vim-piainana | NewsMada
Tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo, nanahirana ny famatsiana solika any Sambava, noho ny fahataran’ny sambo mpitondra solika tonga ao amin’ny seranan-tsambon’i Vohémar. Tratra aoriana manaraka izany ny famatsiana an’i Sambava sy Antalaha, nilaharana ny fividianana solika. Tojo toy izany koa ny tany Sainte Marie, sahirana teo amin’ny famatsiana solika.
Ny ao amin’ny faritra Sava, indrindra any Sambava, nifanojo tamin’ny fanombohan’ny “Festival de la vanille” izay tranga tsy fisian’ny solika izay, koa avy hatrany nampiakatra saran-dalana ireo taxi. Raha 500 Ar isan’olona niakatra 1.000 Ar. Tsy naharitra anefa ny fahataran’ny famatsiana ireo tobin-tsolika. Ampy izao ny tahiry, na izany aza, tsy nidina intsony ny saran-dalana.
Amin’ny ankapobeny, niakatra avokoa ny vidin-javatra any amin’ny faritra Sava, indrindra ireo fampiasan’ny olona andavanandro. Saika niakatra 50 % hatramin’ny 100 % ny vidin-javatra rehetra noho ny lavanila lafo vidy (tsy latsaky ny 800.000 Ar ny masaka ; 150.000 Ar ny maitso). Tsy ny rehetra anefa no mpamboly lavanila.